Vanamai - Bezzia | Bezzia
Iva amai Inguva yakakosha muhupenyu hwevakadzi, imwe yenguva dzakanakisa kwazvo muhupenyu hwavo asi zvakare imwe yevanotungamira. Nechikonzero ichi, kubva kuBezzia tinoda kukupa rairo kuitira kuti maitiro aya aite zvakajairwa: kubva pakubata uye kusahadzika kunogona kumuka panguva ino kudzidzo yevana ivo vasati vari vadiki.
Muchikamu che vanaamai Pachave nemisoro mizhinji inonakidza yevakadzi vane vana: ndezvipi zvekudya kana zvekusadya panguva yekuzvitakura, kukosha kwekutamba muvacheche, matipi enguva iyo mazino anodonha kana maitiro ekuzvibata kana uine vana vanopfuura mumwe.
Saizvozvovo, hakuzove nemazano chete uye neruzivo runobatsira, asi ichaedza kufunga nezvenyika yakaoma yekuva amai. Mamiriro ezvinhu matsva kuvanhu vazhinji asi izvo zvinopedzisira zvave imwe yenguva dzakakosha dzehupenyu.
kubudikidza Maria Jose Roldan inoita 3 mazuva .
Utsanana hwemhino muvacheche ibasa rinofanirwa kuitwa nevabereki zvine hungwaru uye zvine hungwaru. Zviri…
Zvirwere zvinokonzerwa mudumbu uye ura zviri kuramba zvichiwanzoitika uye zvakajairika pakati pevana ...
Nzira yekudzivirira vana kuti vasarote hope dzinotyisa
Zvakajairika kuti vana vezera rakati vagare vachirota hope dzinotyisa. Chokwadi ndechekuti ndinoziva ...
Hutsanana hwepedyo panguva yekuzvitakura
Kunyangwe kunetsekana kwevakadzi vazhinji vane nhumbu, hwema hwakasimba hwemuviri, kunyanya munzvimbo dzepedyo, chinhu ...
Migraine muVana uye Vachiri Kuyaruka
Iyo data inoratidza kuti migraine ndiyo yakajairika mhando yemusoro wepasirese. On…
Zvakajairika kuti vakadzi vazhinji maawa makumi mana nemasere mushure mekuzvara, vanotambura nemaburi akasimba muchibereko…
Iyo inonzi zera reTurkey mukuyaruka
Hapana anopokana nenyaya yekuti hazvisi nyore kana nyore kurera mwana. Matanho ese ...
Zvishandiso zveVicks Vaporub
Sei bonde richikuvadza mushure mekubereka
Kusavapo kwevabereki kunokanganisa vechidiki here?
Mibvunzo neMhinduro Nezvekuyaruka
6 nzira dziri nyore dzekubvisa tatoo yenguva pfupi